श्रीमानसँगै यात्रामा हिँडेकी महिलाको बाटोमा अर्कैसँग ‘लभ’ परेपछि…. « Light Nepal
श्रीमानसँगै यात्रामा हिँडेकी महिलाको बाटोमा अर्कैसँग ‘लभ’ परेपछि….
Published On : 10 September, 2017 9:43 pm
काठमाण्डौँ । घरबाट श्रीमानसँगै हिँडेकी एक महिलाको यात्राकै बीचमा अर्कै व्यक्तिसँग माया बस्यो ।घरबाट निस्किदा श्रीमानसँग हिँडेकी ती महिलाको बाटोमा अर्कैसँग लभ परेपछि घटनाले नाटकीय रुप लिएको छ ।
अहिले उनी ती श्रीमान् र दुई छोराछोरीलाई छोडेर प्रेमीसँग जाने अडानमा छिन् । भारतको मध्य प्रदेशमा यस्तो घटना भएको हो ।
तेजसिंहको विरोध मन नपरेपछि पत्नी अर्चनाले अहिले तेजसिंहसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने अडान लिएर बसेकी छिन् । काउन्सिलरले उनलाई सम्झाउन निकै प्रयत्न गरे पनि उनले सम्बन्धविच्छेदको अडान नछोडेको बताइएको छ ।एजेन्सी